घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको मृत्यु भए आफन्तले शव व्यवस्थापन गर्न पाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको मृत्यु भए आफन्तले शव व्यवस्थापन गर्न पाउने
होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको मृत्यु भएमा शवलाई आफन्तले नै पीपीई लगाई पोका पारेर बडी ब्यागमा राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्यले अनुहार हेर्न चाहेमा ब्यागमा राख्नुअघि नै दुई मिटरबाट हेर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ — घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
यसअघिको मापदण्डमा अस्पतालमा मृत्यु भएका संक्रमितको व्यवस्थापन जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले मात्रै गर्न सक्ने नियम थियो । घरमै मृत्यु भएमा के गर्ने भन्ने कार्यविधिमा समेटिएको थिएन ।
पछिल्लो समय अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले सर्वसाधारणले भोगेको समस्या हटाउन यस्तो मापदण्ड तय गरेको जनाएको छ । ‘अस्पतालमा मृत्यु भएकाको शव सेनाको टोलीले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । मृतकको संख्या बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनसमेत केही ढिलाइ हुन थालेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘घरमै मृत्यु हुनेको सवालमा स्थानीय तह र प्रहरीलाई खबर गरेर आफन्तले व्यवस्थापन गर्न सकिने कार्यविधिमा थप गरेका हौं ।’
काठमाडौंमा एक साताअघि घरमै आइसोलेसनमा बसेका बेला मृत्यु भएपछि तत्काल शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा आफन्तले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई समेत गुहारेका थिए । ‘आफन्तले व्यवस्थापन गर्न चाहँदा पनि कानुनी अड्चन थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैलाई फुकाउन आफन्तले शव ब्यागमा राखेर सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न सकिने मापदण्ड तय गर्नुपरेको हो ।’
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको मृत्यु भए तीन जिल्लाका सेनाको टोलीले पालैपालो व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । एकै दिन फरक जिल्लामा एकभन्दा बढीको मृत्यु भएमा एउटै टोलीले व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइन बस्ने गरेको छ । एक दिन एउटा जिल्लाको टोली परिचालन हुन्छन् भने अर्को दिन अर्को जिल्लाको टोली शव व्यवस्थापनमा खटिने गरेको छ ।
घरमै मृत्यु भए के गर्ने ?
घरमै संक्रमितको मृत्यु भएमा आफन्तले नै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पन्जा, मास्क, पूरा बाहुला भएको गाउन प्रयोग गरी शवलाई र्‍याप गरी ब्यागमा राख्ने काम गर्नुपर्छ । ‘परिवारका सदस्यहरू र अन्तिम संस्कारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले सजगता अपनाई अन्त्येष्टि कार्य गर्नुपर्छ,’ नयाँ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यमा बच्चा र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलगायत जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउनु हुँदैन ।’ आइसोलेसनमा राखेको स्थान/कोठामा शव बोक्ने गाडीसम्म शव पुर्‍याउने काममा समेत मृतकका आफन्त सहभागी हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसअघि शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाउने हुँदा एक मिटर टाढै बसेर हेर्ने मृतकका नातेदारले पन्जा र सर्जिकल मास्क मात्रै लगाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
घरमै मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार आफन्तले स्थानीय प्रतिनिधि र प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समिति वा डीसीसीएमसीलाई खबर गर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक सामग्रीसहितको शव व्यवस्थापन गर्न टोली खटिनेछ । आफन्तले नै पीपीई लगाई शवलाई पोका पारेर बडी ब्यागमा राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्यहरूले अनुहार हेर्न चाहेमा बडी ब्यागमा राख्नुअघि नै दुई मिटरबाट हेर्न सकिन्छ । यसरी पोका पारेको शवलाई डीसीसीएमसीका टोली वा आफन्तले शव वाहन तथा अन्य साधनमा राखेर अन्त्येष्टि गर्न लैजाने स्थानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘शवलाई बडी ब्यागमा राखेपछि खोलेर हेर्न मिल्दैन ।’
कोभिड–१९ को लक्षण तथा चिह्न भएका, प्रयोगशाला निदानका आधारमा सम्भावित वा कोरोना पुष्टि भएर मृत्यु भएका सबैलाई कोरोनाबाट मृत्यु भएकोमा गणना गरिने भएको छ । यसअघिको कार्यविधिमा अन्य कारणबाट मृत्यु भएमा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको नमान्ने कार्यविधि थियो । अब भने लक्षण, चिह्न र प्रयोगशालाको निदानका आधारमा सम्भावित वा पुष्टि भएका केसलाई समेत कोरोनाले मृत्यु भएको मानिने गरी परिभाषा नै परिवर्तन गरिएको हो ।
प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०७:३३
डीडीसीका बटरमा आइस क्रिस्टल
कार्तिक २, २०७७ राजु चौधरी
काठमाडौँ — बालाजुस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को दुग्ध वितरण आयोजनामा मौज्दात बटरमा आइस क्रिस्टल र र बिक्री भइरहेका आधा लिटर प्याकका घिउमा सेतो ठोस पदार्थ फेला परेको छ । घिउमा भेटिएको सेतो ठोस पदार्थ जतिसुकै बढी तापक्रममा पनि नगलेको उजुरी परेको छ ।
बालाजुको वितरण आयोजनामा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो बटर मौज्दात छ । उक्त बटर २५/२५ किलोको कार्टोनमा राखिएको छ । केही कार्टोनमा उपभोगका लागि ८ महिनासम्म राम्रो भनी लेखिएको छ । तर उत्पादन मिति नोभेम्बर २०१९, डिसेम्बर २०१९ उल्लेख छ । ती बटरमा आइस क्रिस्टल भेटिएको हो । बटरमा आइस क्रिस्टल भेटिएपछि बलाजु प्लान्टले केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्देशन गर्न भन्दै पत्र पठाएको छ ।
‘२०७७ भदौ ३ को पत्रका सम्बन्धमा सुजल डेरी प्रालि पोखराबाट प्राप्त भएको मख्खनको बीचको भागमा आइस क्रिस्टल देखिएको छ । मख्खन प्रयोग गर्न हालसम्म कुनै किसिमको निर्देशन प्राप्त नभएकाले उक्त मख्खन प्रयोग गर्न कठिनाइ भएकाले आवश्यक निर्णयका लागि अनुरोध गर्दछु,’ बालाजु वितरण आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशीले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
कार्टोनमा राखिएको बटरमा बीचबाट पाइपबाट तानेर आइसको ब्लक राख्न सकिने डीडीसी कर्मचारीहरू बताउँछन् । बिक्री गर्दा उपभोक्ताले उक्त कैफियत थाहा पाउँदैनन् । ‘बटर मापदण्डअनुसार भए/नभएको साइडबाट मात्रै काटेर परीक्षण गर्ने चलन छ ।बीच भागको पहिचान नै हुँदैन,’ डीडीसीका एक कर्मचारीले भने, ‘बटरमा आइस क्रिस्टल बढी हुँदा जति परिमाणमा घिउ आउनुपर्ने हो, त्यो परिमाणमा आउँदैन ।’ आयोजना प्रमुखले केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाएको पत्रले पनि मापदण्ड नपुगेको पुष्टि गर्छ ।
यता सुजल डेरी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले भने दुर्ई/तीन लाख किलोमा एकाधमा यस्तो क्रिस्टल भेटिनु सामान्य रहेको बताए । ‘बटरमा २० प्रतिशत पानी हुन्छ, कहिलेकाहीँ ढुवानीका कारण पानी बाहिर निस्क्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कसरी भयो भन्ने थाहा छैन । तर उहाँहरूले हाम्रो एउटा सामानमा आइस क्रिस्टल देखिएको भन्नुभएको छ । त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार तापक्रम नमिले पनि समस्या हुन्छ । गुणस्तरमै समस्या भए डेरीको रोहवरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरमा शंका भए काम नगरौं भनेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘बटरको तापक्रम मिलेन भने पनि समस्या हुन्छ । अब रेफ्रिजेरेटर भ्यानभन्दा बाहिर पठाउँदैनौं ।’ प्राविधिक हिसाबले बटरमा समस्या नभएको डीडीसीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दाबी गरे । ‘बटरमा १८/२० प्रतिशत पानी नै हुन्छ । त्यसैले आइस क्रिस्टलले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन,’ उनले भने, ‘पानी नै भएन भने त्यो चाहिँ गम्भीर हो ।’
बटरसँगै बालाजु प्लान्टबाट उत्पादित आधा केजी घिउको प्याकेटमा पनि समस्या देखिएको छ । आधा किलोको घिउमा सेतो ठोस पदार्थ भेटिएको भन्दै उजुरी परेको छ । घिउको गुणस्तरबारे उजुरी परेपछि लैनचौरस्थित दुग्धपदार्थ बिक्रीवितरण आयोजनाले घिउमा देखिएको समस्याबारे केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
‘बालाजु प्लान्टबाट उत्पादित घिउ बजार र डिस्ट्रिब्युटरबाट फिर्ता भई गुनासो प्राप्त भएको छ । गुनासोको विश्लेषण र समस्या पहिचान गरी गुणस्तर सुधार गरिदिन केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाइएको छ,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७५ सालमा दूध तथा दुग्धपदार्थको न्यूनतम गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । खाद्य तथा दाना वस्तुहरूमा निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य गुणस्तरअन्तर्गत घिउको मापदण्ड तयार गरेको छ । ‘घिउ भन्नाले कुनै रङ नहालेको र दूधबाट सिधै वा दूधको दही वा क्रिम वा मख्खनबाट तयार गरिएको चिल्लो पदार्थमा भएको सम्पूर्ण जलांश उड्ने गरी खारी स्वच्छ तुल्याइएको दूधको चिल्लो पदार्थ हुनुपर्ने,’ मापदण्डमा भनिएको छ । तर आधा लिटरमा समस्या देखिएपछि डिस्ट्रिब्युटरहरूले घिउको स्यााम्पल देखाउँदै फिर्ता गर्ने कुरा गरिरहेको स्रोतले बतायो । बिहीबार मात्रै चार जनाले उजुरीसमेत गरेको डीडीसीका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘छामेर हेर्दा दानादाना जस्तो आएको छ । उपभोक्ताहरू प्याकेट नै लिएर आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हेर्दा छेक्राछेक्रा देखिन्छ । बजारमा गएको आधा लिटरको प्याकेटमा धेरै गुनासो आयो ।’
क्रिस्टलका सन्दर्भमा आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बालाजु प्लान्टका आयोजना प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । ‘बजारमा मिसावट गरिएको पनि हुन सक्छ । त्यही भएर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा नमुना पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक प्रमाण चाहिन्छ, त्यही भएर अध्ययन गरिरहेका हौं ।’ जोशीका अनुसार घिउमा विभिन्न तत्त्व हुने भएकाले यो तेलजस्तो हुँदैन । घिउको प्रकृति नै जम्ने किसिमको हुने उनको भनाइ छ ।
डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलले पनि घिउमा ठोस पदार्थ देखिएको र नपग्लिने गुनासो आएको बताए । गुणस्तरका विषयमा भने कुनै समस्या नभएको उनको दाबी छ । ‘प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा समस्या छैन । घिउ तताउँदा अलिकति कनिका जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर गुणस्तरमा समस्या छैन । कुनै खराबी पनि छैन ।’ कुनै लटमा भैंसीको दूधको मात्रा बढी हुँदा त्यस्तो समस्या देखिन सक्ने डीडीसीको दाबी छ । ‘गुनासो गर्न आउँछन्, कतिपयलाई सम्झाएर पठाएका छौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०७:३२